श्रीमानले याै’नसम्बन्ध नराखेपछि आत्मह’त्या गरेकी डा. प्रियाको त्यो सुसा*इड नोट, जसले संसारलाई रूवायो… | Sawal Nepal |The Power of Information
Posted By: सवाल नेपालon: २०७६ फाल्गुन १२, सोमबार १२:५३ मा प्रकासित Tags: No Comments
भारत १ डिसेम्बर- मृ*त्यु रोज्नुअघि उनले फेसबुकमा सुसा*इड नोट लेखेकी थिईन् । उक्त सु’साइड नो’टले भारत लगायत सामाजिक सञ्जालमा लामो समयदेखि चर्चामा अाएकाे हाे । नया दिल्ली, आफ्नो श्रीमान समलि’ङ्गी भएपछि अल इन्डिया मेडिकल इन्सिच्युट (एम्स) की डाक्टर प्रिया वेदीले सुसा’इड नोट लेख्दै आत्मह*त्या गरेको घटनाले संसारभर चर्चा पायो।
उनले फेसबुकमा लेखेको सुसा’इड नोट नोट यस्तो थियो :
म पछिल्लो पाँच वर्षदेखि डा. कमल वेदीसँग दाम्पत्य जीवन बिताइरहेकी छु । दाम्पत्य जीवनको महत्वपूर्ण अंश शा*रीरिक सम्बन्ध यो अवधिमा हामीबिच कहिल्यै भएन । विवाहको ६ महिनासम्म मैले आफूलाई सामान्य रुपमा सम्हाले, त्यसपछि मेरो मनमा आउन थाल्यो, ‘आजसम्म किन शा’रीरिक सम्बन्धका लागि मेरा श्रीमान् तयार भएनन् ?’